I-TV yami ayingitsheli lutho: yini okumele ngenze ukuyilungisa? | Iforamu yeselula
UDaniel Terrasa | 20/06/2022 22:30 | Kubuyekezwe ku- 20/06/2022 22:34 | Internet
Kwezinye izikhathi sithola ukuthi asikwazi ukusebenzisa isethi yethu ye-TV futhi okuwukuphela kwento esiyibona esikrinini ilebula ebonisa ukuthi "Akukho signali" (noma Akunasiginali, ngesiNgisi). Kungaleso sikhathi lapho kuphakama imibuzo: Kwenzekani? Kungani i-TV yami ingasho lutho? Futhi, ngaphezu kwakho konke: yini engingayenza ukuze ngikuxazulule?
Akungabazeki ukuthi lesi yisimo esithize esicasulayo. Kodwa-ke, ukuyixazulula ezimweni eziningi akudingekile ukuphendukela kusevisi yosizo lobuchwepheshe. Lokho kuyindlela yokugcina kuphela. Ngaphambi kwalokho, ungazama ezinye zazo izixazululo esikuchazayo kulesi sihloko.
1 Lisho ukuthini iphutha elithi "No signal"?
2 Izixazululo kokuthi "I-TV yami ayingitsheli isignali"
2.1 Linda imizuzu embalwa
2.2 Vula futhi uvale i-TV
2.3 Hlola isokhethi yothi
2.4 Hlola uxhumano lwe-HDMI
2.5 Xazulula izinkinga nge-HDCP
2.6 Buyisela izilungiselelo zefekthri
3 Ezinye izinkinga ezivamile
3.1 i-tv yami ngeke ivule
3.2 Isikrini se-TV siba mnyama
Lisho ukuthini iphutha elithi "No signal"?
Cishe zonke izinhlobo zethelevishini zihlomisa amasethi abo nge indlela yokuxhuma okuzenzakalelayo. Ngaphansi kwezimo ezijwayelekile, lokhu kusetshenziselwa ukuthola idivayisi nokuyibonisa esikrinini lapho sicindezela inkinobho yamandla kusilawuli kude.
I-Ver también: Izixazululo zezinkinga zansuku zonke ukuze ungabi inkimbinkimbi impilo yakho yezobuchwepheshe
Uma kunenkinga yokuxhumeka kwenethiwekhi, kuvela umlayezo osixwayisa ngokuthi asikho isignali okufanele siyilungise sisebenzisa ezinye zezindlela ezinemininingwane engezansi:
Izixazululo kokuthi "I-TV yami ayingitsheli isignali"
Ziningi izindlela zokuxazulula le nkinga ecasulayo esike sihlangabezane nayo uma sifuna ukubukela i-TV. Ngamunye wabo uzoxhomeka esimweni senkinga. Lezi zivame kakhulu. Sikweluleka ukuthi uzizame ngokulandela uhlelo olufanayo esiziphakamise ngalo:
Linda imizuzu embalwa
Njengoba kungenangqondo njengoba kuzwakala, isisombululo sokuqala yilesi: ungenzi lutho, vele ulinde. Uma, isibonelo, sibuka isiteshi se-DTT, mhlawumbe iphutha libangelwa inkinga yesikhashana yokuxhuma evame ukuxazululwa ngokushesha ngaphandle kokuthi sithathe isinyathelo.
Vula futhi uvale i-TV
Lesi yisixazululo sokuqala okufanele sizame, ngoba izikhathi ezingaphezu kwesisodwa kwanele ukulungisa izinto. Kufanele cisha idivayisi, linda imizuzu embalwa bese uyivula futhi ukuze iqale kabusha.
Lokhu kulingana nesixazululo sakudala esithi "cisha futhi uvule" bonke ososayensi bekhompyutha abasisebenzisayo esikhathini esithile empilweni yabo ukuze balungise izimo ezithile. Uma inkinga iqhubeka, kufanele uye esinyathelweni esilandelayo.
Hlola isokhethi yothi
Mhlawumbe isignali ye-antenna singafinyeleli kumabonakude wethu ngendlela efanele. Kulesi simo, hlola isokhethi ye-antenna, uhlole ukuthi ixhunywe kumabonakude. Kwesinye isikhathi ukuxhumana kuhle, kodwa ikhebula elisetshenzisiwe lidala noma alisezingeni eliphansi futhi lidinga ukushintshwa.
Hlola uxhumano lwe-HDMI
I-TV yami ayingitsheli lutho: ezimweni eziningi inkinga ikuzintambo noma izimbobo ze-HDMI (i-multimedia interface enencazelo ephezulu). Kuvamile ukuthi ukuxhumana "nomdanso" noma amachweba konakaliswe. Izixazululo ezingaba khona ukusebenzisa enye imbobo ye-HDMI yamahhala ku-TV noma esikhundleni sembobo eyonakele, ukulungisa okulula okungenziwa noma yimuphi uchwepheshe.
I-Ver también: I-HDMI noma i-DisplayPort? Izinzuzo kanye nebubi ngayinye ngayinye
Xazulula izinkinga nge-HDCP
Nakuba kungeyona imbangela evame kakhulu, kufanelekile ukwenza lokhu kuhlola uma konke okungenhla kungazange kusebenze. Kwesinye isikhathi i-TV ayibonisi isignali ngenxa a Iphutha lokuvikela okuqukethwe okudijithali komkhawulokudonsa ophezulu (HDCP), elungiswa ngokukhipha idivayisi yangaphandle exhunyiwe edala iphutha. Kulezi zinsuku kuyivelakancane ukuhlangana nalokhu njengoba cishe wonke ama-TV esimanje athobela i-HDCP.
Buyisela izilungiselelo zefekthri
Uma konke okunye kuhlulekile, inhlamvu yokugcina ekamelweni buyisela izilungiselelo zasembonini. Ngokwenza lokhu, umlayezo othi “Ayikho isignali” cishe uzonyamalala, kodwa zonke iziteshi nezilungiselelo nazo zizosuswa, okuzodingeka sizilungise kabusha.
Ezinye izinkinga ezivamile
Ngaphandle kombuzo othi “umabonakude wami ungitshela ukuthi akukho msindo”, ziningi ezinye izinkinga esingahlangabezana nazo uma sivula umabonakude ekhaya. Lezi ngezinye zezinto ezivame kakhulu, nezixazululo zazo:
i-tv yami ngeke ivule
Lapho lokhu kwenzeka, ingqondo isitshela ukuthi kwasekuqaleni kufanele khipha izimbangela ezilula (esike singakunaki): hlola ukuthi amabhethri esilawuli kude awapheli yini, nokuthi intambo yamandla kamabonakude ixhunywe ngendlela efanele kumapayipi amakhulu. Nokuthi kukhona ugesi ekhaya, kunjalo.
Kwesinye isikhathi lokhu kulungiswa ngokukhipha ikhebula, ukulinda uhhafu womzuzu, bese uyixhuma futhi. Kodwa uma kungekho kulokhu okusebenzayo, awunakho ukukhetha ngaphandle kokubiza usekelo lobuchwepheshe.
Isikrini se-TV siba mnyama
Uma i-TV ivuliwe (isibani esibomvu sizositshela) kodwa isikrini sibonakala simnyama, maningi amathuba okuthi ukusakazwa kwe-DTT noma ukusakazwa kwesiteshi kuphazamiseke ngesizathu esithile. Uma kwenzeka kithi ngenkathi sixhumene a idivaysi yangaphandle njengesidlali seDVD noma ikhonsoli yomdlalo, kuzodingeka ubheke iphutha kuyo. Isikrini esimnyama singase sibe ngenxa yokuxhumeka okubi kwekhebula le-HDMI, okuzodingeka silihlole.
Indlela ephelele ye-athikili: Iforamu Yeselula » Internet » I-TV yami ayingitsheli lutho: yini okumele ngenze ukuyilungisa?